Saddex nin oo qorsheynayay weerar ka dhan ah bulshada Soomaalida ee magaalada Kansas oo la qabtay - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldSaddex nin oo qorsheynayay weerar ka dhan ah bulshada Soomaalida ee magaalada Kansas oo la qabtay
October 15, 2016 Abdirahman Abdullahi Sheikh World 0
Washington-(Puntland Mirror) Haayadaha federaalka Maraykanka ayaa sheegay in ay xireen saddex nin kuwaasoo lagu eedeeyay in ay isku-dayeen in ay qarxiyaan xarumo kuyaala magaalada Kansas.
Tom Beall, oo ah sii hayaha xeer ilaaliyaha Maraykanka, ayaa sheegay shalay oo Jimce ahayd in saddexda nin lagu eedeeyay argagixiso maxali ah oo qorsheynayay in ay qarxiyaan dhisme qaybeed halkaas oo ay qoysas Soomaali ah kunoolyihiin ayna ku cibaadaystaan.
Saddexda nin ayaa loo aqoonsaday; Curtis Allen oo 49-sanno jir ah, Gavin Wright oo 49-sanno jir ah iyo Patrick Stein oo 47-sanno jir ah, kuwaasoo lasoo qabtay subaxnimadii Jimcada.
Nimanka ayaa qorsheeyay in ay qaraxa geystaan 8-da November si aysan u saamayn doorashada madaxtinimada Maraykanka, taasoo dhacaysa 8-da November, sida ay sheegeen dambi-baarayaasha Federaalka.
January 7, 2017 Nin qori ku hubaysan oo shan qof ku toogtay garoonka diyaaradaha Fort Lauderdale ee gobolka Florida ee Mareykanka